China Advertising 3d nitarika taratasy akrilika ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy marika fivarotana |Zhengcheng
Dokam-barotra 3D Led Acrylic Letter ho an'ny marika fivarotana
Ny loko logo dia azo amboarina.Ny litera acryl dia vita amin'ny taratasy acryl nafarana, izay mahatohitra ny deformation ary tsy mora levona.Fitaovana blister mahazatra ho an'ny blister, misy loharanon-jiro LED avo lenta.
Info momba ny vokatra
Anaran'ny vokatra: Led acrylic taratasy
Fitaovana: Taratasy acryl nafarana
Ny tombony amin'ny litera acrylic LED
Ny litera acrylic LED dia iray amin'ireo famantarana ivelany malaza indrindra ankehitriny.Asehony mazava tsara ny anaran'ny sonia, izay manazava azy indray mipi-maso.Ny sary famantarana mazava, tsara tarehy ary mamirapiratra dia mora tadidina.Io no iray amin'ireo famantarana ara-javakanto ivelany be mpampiasa indrindra.
Ny fivarotana sasany dia kely kokoa, noho izany dia azonao atao ny mampiasa litera acryl ho famantarana, izay tsara tarehy sy tsara tarehy.Mandritra izany fotoana izany, ny fametrahana dia tsotra sy mety.
Tsy azo ampiasaina amin'ny famokarana famantarana fotsiny ny litera akrilika mitarika, fa azo ampiasaina ho haingon-trano anatiny mba hampitomboana ny vokatra marika.
Q1.Afaka manana baiko santionany ve aho?
Valiny: Eny, mandray santionany baiko izahay mba hijerena sy hitsapana ny kalitaon'ny vokatra.
Q2.Moa ve ianao orinasa / mpanamboatra na orinasa varotra?
Valiny: Izahay dia mpanamboatra mampiditra R&D, famolavolana ary famokarana.Manana orinasa manokana izahay.
Q3.Ahoana no ametrahanao ny vokatra?
Valiny: Ny ao anatiny dia boaty misy foam miaro sy baoritra misaraka, ary ny ivelany dia fonosana hazo mafy.
Q4.Tsy manana sary aho, azonao atao ve ny mamolavola ho ahy?
Valiny: Eny, ny mpamorona anay dia hamolavola ho anao araka ny vokatra tadiavinao.
Q5. Ahoana no hahazoana ny vidin'ny vokatra?
Valiny: Azonao atao ny mandefa ny fampahalalana momba ny vokatra tianao ho fantatra amin'ny mailaka na mifandray amin'ny mpitantana ny varotra an-tserasera, hamaly anao amin'ny vidiny mifandraika haingana araka izay tratra.
teo aloha: Famaritana avo lenta 3d - dokam-barotra 3d mitarika taratasy akrilika ho an'ny marika fivarotana - Zhengcheng
Manaraka: Boaty jiro amin'ny sakafo ho an'ny latabatra famandrihana trano fisakafoanana
Blister Light Box Signboard, Vacuum Forming Light Box Signboard, Supermarket Signboard, Fanondroana Boaty Jiro ivelany, Pharmacy Signboard, Famantarana mirehitra,